IGeorge izama unkunciphisa ifuthe lesiza sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela sommandla | George Municipality
Home>News>IGeorge izama unkunciphisa ifuthe lesiza sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela sommandla
IGEORGE IZAMA UKUNCIPHISA IFUTHE LESIZA SOKULAHLA INKUNKUMA NGOKUYIGQUMELELA SOMMANDLA
Ekubeni iinkxalabo malunga nokungabi nakumelana neendleko zesiza esitsha sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela sommandla esicetywayo zihleli zikhangeleka ngathi aziqwalaselwa ngurhulumente wommandla kunye nowephondo malunga neenyanga ezilishumi linesine phambi kokusetyenziswa kwaso okunyanzeliswayo, uMasipala waseGeorge uyaphanda kwaye uphumeza amanyathelo ahlukeneyo okuzama ukunciphisa unyuso kuluhlu lwamaxabiso enkunkuma exesha elizayo ukuya kuma kwi-121%.
uMasipala waseGeorge ngomnye weziphatha mandla zasekhaya ezine kummandla ezinenkxalabo malunga neendleko eziqikelelweyo zokumiselwa kunye nokugcinwa kwesiza somdibaniso esitsha sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela , ezicinga ukuba ziphezulu ngokugqithileyo kanti zinyanzeliswa ukuba zithathe inxaxheba kuso ukuthobela umthetho wokusingqongileyo welizwe.
Le nyewe igxininisiwe ngexesha lentlanganiso eYodwa yeBhunga likaMasipala waseGeorge ngoMvulo (17 EyeKhala 2017) apho isindululo siye sanekwa sokuba kwenziwe isicelo se-R17 yezigidi kwiSebe leNtshona-Koloni leMicimbi yokuSingqongileyo kunye noCwangciso loPhuhliso ukuba libonelele ngentsilelo angasayi kuba nakuyihlawula umasipala ngakukumiswa kwesiza sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela koonyaka-mali bama-2017/18 kunye nama-2018/19. Isindululo siye saxhonywa ukuze kuqokelelwe ulwazi olongeziweyo, obelucelwe ngooceba ukuze babenolwazi oluphangaleleyo ngale nyewe kwaye luyakwanekwa kwakhona ngexesha elililo.
uMphathi kaMasipala waseGeorge uTrevor Botha uthe imiba ejikeleze ukulawulwa kwenkunkuma kunye nesiza sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela inamacala amaninzi kwaye idinga intsebenziswano yoorhulumente bonke nezisombululo zemali ezivela kubo bonke ababandakanyekayo. “ooMasipala bayasiqonda isidingo sesiza sommandla sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela kwaye bebesebenza nzima kakhulu kwicala lethu ukuza nesisombululo esiya kunciphisa iindleko,” utshilo uMnu. Botha.
Ukukhula ngokukhawuleza kwenani labemi besixeko kunye nommandla kube nefuthe kuzo zonke izinto zeenkonzo zikamasipala kuninzi lweziphatha mandla zasekhaya. Abantu abangaphezulu bathetha inkunkuma engaphezulu, ebangele ukuba oomasipala abaninzi bajongane nenkunkuma egqithileyo kakhulu kwiziza zabo ezincinci zokulahla kunye nezokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela . E-Eden, njengokuba iiziza zokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela zigcwele, oomasipala kuye kwafuneka bakhe izikhululo zotshintshelo baza bangena kwisivumelwano noPetro SA ukuba ajongane nenkunkuma egqithileyo, kodwa naso esi siza siyagcwala kwaye siza kuvalwa ekupheleni kweyeThupha 2018.
Ifuthe loLawulo lokuSingqongileyo lweSizwe: uMthetho weNkunkuma, ofuna ukuba kubekho ukuncitshiswa okukhulukazi kwenkunkuma kunye nesithuba sesiza sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela, likhokelele kwimiyalelo evela kwiSebe leMicimbi yokuSingqongileyo yokuba iziphatha mandla zasekhaya zithathe inxaxheba kwisiza sommandla sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela somdibaniso (njengoko likuchasile ukuba elowo akhe esakhe) - ngenjongo yokugqibela yokunciphisa inkunkuma ibe ncinci ngokupheleleyo.
uMasipala weSithili sase-Eden ugunyazise uphando lokwalatha umhlaba ofanelekileyo kunye neengqikelelo zeendleko zesiza sommandla esicetywayo. Iingqwalaselo zokumisa umhlaba ofanelekileyo ziquka nokubunjwa komhlaba kuthathelwe ingqalelo izinto ezifana nokuba nako ukomba nzulu ngokukhuselekileyo, ukumiswa kwesiza ngokunxulumene neendawo zokuhlala, kunye nesithuba esikhulu ngokwaneleyo sokukhongozela inkunkuma yoomasipala abane ubuncinane kuquka iGeorge, Mossel Bay, Knysna kunye neBitou (Plettenberg Bay). uMasipala weSithili sase-Eden ubonakalise ukuba iipersenti zendleko, phakathi kwezinye izinto, bezisekelwe kwinkunkuma eqikelelweyo ngomasipala ngamnye.
KwekaCanzibe kulo nyaka, uMasipala weSithili sase-Eden uchazile ukuba isiza sithengiwe kwaye iindleko eziqikelelwayo zomnyaka kuMasipala waseGeorge ziya kugqitha kuma -R31 ezigidi – ezingaphezulu ngokubalaseleyo kwi-R11 lezigidi ebekwenziwe uhlahlo lwabiwo-mali lwazo malunga nonyaka-mali wama-2017/18 (ezisele zonyuke nge-15% ukususela kunyaka ongaphambili ukudambisa ifuthe elilindelweyo lokusebenzisa isiza esitsha sommandla sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela) kunye ne-R14 lezigidi zomnyaka wama-2018/19.
Kwintlanganiso yangoMvulo, uMnu. Botha uthe oomasipala abachaphazelekayo apho imicimbi yokusebenza ebalulekileyo enxulumene noko- efana neenzame zokunciphisa inkunkuma, iintlawulo zabacebisi, ukufunyanwa kwezinto ezizezikamasipala, iindleko zokusebenza kunye namaxesha amisiweyo – bezingaqwalaselwa ngokwanelisayo kwiindawo zokwazisa ngale nyewe zangaphambili. Inkxalabo kukuba ezinye iindleko ezingabalulwanga ngezithintelwe okanye ziqwalaselwe ngendlela eyahlukileyo ukunciphisa iminikelo ekulindeleke ukuba oomasipala bayihlawule.
Iinkxalabo zixhokonxwa yinyani yokuba , ngelixa oomasipala bethatha amanyathelo abalulekileyo ngokwahlukeneyo kunye nakunye ukunciphisa umthamo olinganiswe ngeetoni wexesha elizayo kunye neendleko zizonke, inkunzi ekuqaleni kokumiswa kunye nokugcinwa kwesiza iya kuba nefuthe elikhulu, kungananzwanga umthamo olinganiselwa ngeetoni.
Iqonga lengxoxo laBaphathi booMasipala beSithili sase-Eden lenze isicelo kuMphathiswa wePhondo leNtshona-Koloni kaRhulumente waseKhaya, Imicimbi yokuSingqongileyo kunye noCwangciso loPhuhliso, uAnton Bredell, ukuba ancede kule nyewe kwaye imizuzu yeentlanganiso zeqonga lengxoxo iyanikezelwa kwi-ofisi yakhe. Kude kube ngoku Isebe lezeMali lePhondo alikasikhuphi isiqinisekiso esinxulumene noku malunga nokungamelani neprojekthi koomasipala abanxulumene noko.
Indlela yokubona kunye nezicwangciso zikaMasipala waseGeorge
uMasipala waseGeorge uyasiqonda isidingo sesiza sommandla sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela, kodwa uxhalabile malunga nefuthe kwezemali langoku elicetyiswayo. Kanti, umasipala akazi kulinda de umcimbi usonjululwe okanye uqwalaselwe, ukuze aqale ngokusebenzela unciphiso lwenkunkuma kunye nezinye izisombululo.
uMasipala waseGeorge ngoko uza kuxinzelela onke amanyathelo onciphiso lwenkunkuma, kuquka:
Ulwandiso, kulo nyaka-mali, lweSikhululo sangoku soTshintshelo lweNkunkuma saseGeorge ukubandakanya iziko lokuhlela izinto ezilahliweyo eziza kulungiswa ukuze zibe nokusetyenziswa kwakhona kunye nesiza sovundiso.
Intsebenziswano yoomasipala kunye nabanye oomasipala ukwandisa imithombo kunye nokunciphisa iindleko zizonke
Umzamo ngamxhel’omnye wokubandakanya oomasipala baseHessequa kunye nowaseThsorweni ngethemba lokwahlula iindleko ezidibeneyo ngesithandathu endaweni yesine. (iHessequa iqikelele isithuba sesiza sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela seminyaka emi-3 ukuya kuma kwemi-6 kwaye iThsorweni inesithuba sesiza sokulahla inkunkuma ngokuyigqumelela esifumanekayo seminyaka engama-20 ukuya kuma -30).
Uphando kumathuba ohlukeneyo okusebenzisa inkunkuma elahliweyo ukuze ilungiswe ibe nokuguqulelwa kwizinto ezinokusebenza kwakhona kunye nezintlu zemivuzo enxulumene noko
Uphando lwezisombululo zenkunkuma eguqulelwe kummandla ombane.
Ukuqonda okwandisiweyo kunye namaphulo okunciphisa inkunkuma
Umsebenzi wolwahlulelwano lukarhulumente nolwabucala ukudala imisebenzi kunye nengeniso ngapha kwezintlu zenkunkuma ezininzi kangangoko kunokwenzeka.